Ngathi | Shijiazhuang Senlai Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd.
Shijiazhuang Senlai Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd. esekwe ngo-2012, ibekwe e Shijiazhuang City, kwiPhondo Hebei. Singumvelisi oqeqeshiweyo weempahla zabantwana, iimveliso ziyahlangabezana ne-oeko-tex 100 yenqanaba 1 lokuqinisekiswa.
Inkampani ineengcamango eziphambili zoyilo, itekhnoloji yokuvelisa ngokugqibeleleyo kunye neqela labasebenzi abomeleleyo. Inokuduma okunamandla kunye nodumo kwintengiso yamanye amazwe, kwaye ithengiswa kakuhle kumantla eYurophu nakuMntla Melika. Inkampani yahlulwe kwisebe leshishini, isebe lolawulo lweeodolo, isebe lokulungisa isampulu, isebe lokuthenga amalaphu, isebe ngalinye linecandelo elingqongqo nelicacileyo labasebenzi, iimpahla, iimpahla, amaqhosha neminye imiba ilawulwa ngokungqongqo, umgangatho olungileyo ngowokuqala ukulandela.
Shijiazhuang Senlai Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd., esekwe ngo-2012.
Amandla ethu imveliso phezu iziqwenga 200000 ngenyanga nganye.
Singumvelisi oqeqeshiweyo weempahla zabantwana, iimveliso ziyahlangabezana ne-oeko-tex 100 yenqanaba 1 lokuqinisekiswa.
Sisoloko sibambelela "kwintembeko, ukuphumelela, uloyiso, injongo yeshishini".
I-Shijiazhuang Senlai yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle urhwebo lwe-Co, iimveliso eziphambili zi-raincoat yabantwana, ibhegi yokulala yosana, ibhibhi yomntwana kunye nempahla entsha yomntwana. Amandla ethu imveliso phezu iziqwenga 200000 ngenyanga nganye. Le nkampani iye abasebenzi yoyilo yobungcali, abasebenzi ilokhwe impahla impahla, abasebenzi imveliso isampuli yobungcali. Abasebenzi bokuvelisa iimpahla baneminyaka emininzi yamava ebhodi enamava, abaqheleneyo neempawu zezinto zokunxiba zomhlaba ezahlukeneyo, bayazi iimfuno zeemveliso ezahlukeneyo kunye namalaphu kwipateni. Uqhelene nazo zonke iintlobo zokwenza ipleyiti yempahla, ukuseta inkqubo, ipateni kunye nobungakanani, ukumiselwa okuqhelekileyo kunye nenkqubo yokuvelisa, kwaye unokugqibezela imveliso yesampulu yoyilo nganye ngokweemfuno zomyili. Senze ushishino neenkampani ezininzi zangaphandle. Njengeseti yoyilo lwempahla, imveliso, inkonzo kwelinye lamashishini eengubo ezinobungcali, sihlala sihambelana "nokuthembeka, ukuphumelela, ukuphumelela, injongo yoshishino". Ukujonga phambili kurhwebo olunobuhlobo ngakumbi neenkampani ezininzi zeempahla.
Abathengi bethu bahanjiswa ikakhulu kumantla eYurophu naseYurophu. Umzekelo, iDenmark, iFinland, iNorway, iIceland, iJamani, iFrance, iJapan kunye nezinye iindawo. Ngenxa yemozulu, imozulu kunye nezinye izizathu kula mazwe, ilunge kakhulu kuhlobo lwempahla yethu. Kakade ke, Shijiazhuang Senlai Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd. yamkela abathengi abavela kulo lonke ihlabathi ukubuza, siza kukunika inkonzo eyanelisayo.
Njengeseti yoyilo lwempahla, imveliso, inkonzo kwelinye lamashishini eengubo ezinobungcali, sihlala sihambelana "nokuthembeka, ukuphumelela, ukuphumelela, injongo yoshishino". Ukujonga phambili kurhwebo olunobuhlobo ngakumbi neenkampani ezininzi zeempahla.